Remote Remote ho an'ny BMW
Lakilavitra lavitra ho an'ny Citroen / Peugeot
Ho an'i Mazda
Akorandriaka lehibe ho an'i Ford
Akorandriaka lehibe ho an'ny VW
Ahoana ny fomba fandaharana lakile F andiana fiara
Ankehitriny ny andiany BMW F vaovao dia miaraka amina rafitra roa: ny rafitra CAS4 sy ny FEM / BDC. Fomba roa an'ny programa CAS4 miady amin'ny halatra. Ny tetika fanapahana programmer natsangan'ny CAS4 tamin'ny taona voalohany dia nampiasaina ary mbola tian'ny tompony maro. Ny programmer dia mamaky ny chip amin'ny alàlan'ny interferen matetika ...
Torolàlana ho an'ny teknolojia manan-danja amin'ny fiara
Toy ny mahazatra, ny fiara rehetra amin'izao fotoana izao dia mampiasa fomba fanombohana mitovy-manodina ny herinaratra amin'ny alàlan'ny switch switch mba hampandeha ny motera ary avy eo ny motera. Saingy, ny fomba fifehezana ny switch dia tsy mitovy amin'ny maodelin'ny fiara. Ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa ny fomba nentim-paharazana nampidirina ny lakile, whi ...
Ahoana no hiatrehana ny tsy fahombiazan'ny lakilen'ny fiara
Miaraka amin'ny fampivelarana ny siansa sy ny teknolojia, ireo fikirakiran'olombelona ireo dia nanampy anay hamonjy olana maro, izay hita avy amin'ny lakilen'ny fiara lavitra. Ny lakilen'ny fiara voalohany dia mitovy amin'ny fanalahidin'ny tranontsika. Mila sokafana ny varavaran'ny fiara amin'ny alàlan'ny fampidirana lakile mekanika ao anaty lavaka fanalahidy ....
ny fomba fiasan'ny lakilen'ny fiara？
Ny lahatsoratra voalohany: fitsipiky ny fiasan'ny puce key an'ny fiara Anisan'ireo fitaovana elektronika efa be mpandeha ao anaty fiara, ny rafitra fanalahidy marani-tsaina dia manintona tokoa. Ny teknolojia fidirana tsy misy lakilaka dia mitondra fahafaha-manao tsara, ary ny fanombohana tokana dia mitondra fahatsapana teknolojia feno, saingy lafo kokoa ny fandikana ny ...
Ny fomba fanamboarana ny metatra Tiguan dia mampiseho ny “lakile tsy hita”
Nijanona tao amin'ny garazy ny fiara ary maninona no tsy manomboka amin'ny andro manaraka? Saingy, amin'ity tabilao ity dia tsy mampiseho "rafitra fanoherana ny halatra", fa "tsy hita ny lakilen'ny", ara-dalàna ny fanalahidy lavitra, fa tsy mahita ny fiara! Inona no olana? Aorian'ny fizahana tsara, ...
Fomba fanesorana ny fanoherana ny halatra ho an'ny kinova 4, kinova 5 an'ny Tiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
Volkswagen sy Audi faha-4 sy faha-5 fanafoanana fanoherana ny halatra dia nahitana maodely maro, anisan'izany ny Volkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L, ny sasany A6L, sns. Azon'izy ireo atao ny manafoana ny fanoherana ny halatra, toy ny fampiasana serie Bosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X ...
Ahoana no hatao raha mihidy ao anaty fiara ny varavarana?
Tsy mitsaha-mivoatra ny fari-piainan'ny olona, ​​noho izany ny hafaingan'ny Rhythm. Amin'ity tranga ity, ny olona sasany dia ho kamo, ary matetika izy ireo mamela ny poketra na ny zavatra ao an-trano rehefa mivoaka. Tsy maninona na hadinonao ireo zavatra madinidinika ireo, fa raha manidy ny lakilen'ny fiara ianao ...
Aiza no ahazoana ny lakilen'ny fiara fanoloana？
Ahoana no hatao raha very ny lakilen'ny fiara? Tompon'ny fiara maro no sahirana amin'ity olana ity. Rehefa natolotra ilay fiara vaovao dia nisy lakile roa. Ilay very dia mbola manana fanalahidy hitsitsiana, fa ahoana kosa ny raha toa ka very ihany koa ny lakilen'ny fiantrana? Avy eo dia mila mifanitsy amin'ireo lakile ianao. Androany no holazaiko aminao ny fomba fampifanarahana ny lavitra ...
Ny fivoaran'ny faktioran'ny banky foibe: famerenana ny tantara an-tanety sy ny toetran'ny fiverenana an-dranomasina | People's Bank of China_Sina Finance_Sina.com
Tonga eto ny Ant Ant group! 29 Oktobra! Manokatra kaonty izao ary miomàna hividy! [Midira avy hatrany ao anaty fiara mba ho lasa shareholder ary mankafy tombontsoa fanokafana kaonty! 】 Ny faktiora amin'ny banky foibe dia fifamatorana fotoana fohy navoakan'ny People's Bank of China, izay alain'ny banky ara-barotra avy ...
Mifandraisa amin'ny toeram-panamboarana manamboatra lakile vaovao Raha misafidy ny hampita ny fanamboarana fanalahidy vaovao ianao dia mila manome ny fiara sy ny karapanondron'ny tompony. Araka ny maodely isan-karazany, ny tobin'ny fanamboarana dia mitaky ny tompony hanome teny miafina miady amin'ny halatra 17 isa ho an'ny lakile fanamboarana. T ...
Ny lakilen'ny fiara dia manana asa miafina efatra, afaka mamonjy aina amin'ny fotoana maika
Vohay fotsiny ny varavaran'ny taksi Ny ankamaroan'ny fiara dia tsy afaka mamoha ny varavaran'ny taksi fotsiny rehefa manindry bokotra lavitra ianao, ary aorian'ny fanindriana azy indroa dia afaka sokafana daholo ny varavarana. Ny mpamily sasany dia mandray ny fiara amin'ny toerana fijanonana lavitra, Raha manokatra ny varavaran'ny taksi fotsiny izy ireo dia afaka manakana ireo olon-dratsy tsy hiditra amin'ny fiara ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-15
Fandaharam-potoana mba hisorohana ny kaonty amin'ny alàlan'ny mailakao - Midira - Ampio zavatra misy habetsaky ny sarety - Alefaso (zahao) - Safidio ny mpivarotra ny serivisinay 1.Manolotra karazana lakilen'ny fiara maro izahay, puce transponder, programmer key, fitaovana mpanao birao , sns. 2. Izay rehetra manontany dia hovaliana w ...